Iifutshane ezimfutshane ezivela kwiProjekthi Gutenberg
Iincwadi Amabali amfutshane
Ubuncwane kwiNdawo yoluntu
Eyasungulwa nguMichael Hart ngo-1971, iProjey Gutenberg yilayibrari ye-digital yamahhala eneencwadi ezingaphezulu kwama-43,000 e-ncwadi. Uninzi lwemisebenzi luseburhulumenteni , nangona ngamanye amaxesha abanikazi be-copyright banikeze imvume yeProjekthi Gutenberg yokusebenzisa umsebenzi wabo. Uninzi lwemisebenzi luyiNgesi, kodwa ilayibrari ibandakanya iitekisi zesiFrentshi, isiJamani, isiPutukezi nezinye iilwimi. Inzame iqhutywa ngamavolontiya asebenza rhoqo ukunyusa iminikelo yelayibrari.
Iprojekthi yeG Gutenberg yaqanjwa ngokuthi nguJohannes Gutenberg, umvelisi waseJamani oye wavelisa uhlobo oluthenjwayo ngo-1440. Uhlobo olushenxisayo kunye nolunye uphuhliso lokunyathelisa, luncedisa ukuququzelela ukuveliswa kwemimandla yecatshulwa, okwakusasaza ukusabalalisa ngokukhawuleza ulwazi kunye neengcamango zobugcisa, isayensi kunye ifilosofi. I-Goodbye, i- Middle Ages . Sawubona, uVukahlengelo .
Qaphela: Ngenxa yokuba imithetho ye- copyright ihluka ukusuka kwilizwe ukuya kwilizwe, abasebenzisi abangaphandle kwe-United States bayacetyiswa ukuba bahlole imithetho ye-copyright kumazwe abo asemthethweni ngaphambi kokulanda okanye ukuhambisa nayiphi na imibhalo evela kwiProjekthi Gutenberg.
Ukufumana iifutshane kwiSayithi
Iprojekthi yeG Gutenberg inikeza uluhlu olubanzi lweetekisi, ukususela kuMgaqo-siseko wase-United States ukuya kwimibandela endala yeMicrosoft Mechanics ukuya kwiinkcazo zonyango ezintle ezifana ne-1912 ye-Cluthe's Advice kwi-Ruptured.
Ukuba uzingela ngokukhawuleza amabali amancinci, ungaqala kunye nencwadi yeendaba ezimfutshane ezilungiselelwe yi-geography nezinye izihloko.
(QAPHELA: Ukuba unenkathazo yokufikelela kumaphepha eProjekthi yeGeneren, khangela ukhetho oluthi, "Vala olu qhosha eliphezulu" kwaye iphepha kufuneka lisebenze.)
Ekuqaleni, eli lungiselelo libonakala lichanekileyo, kodwa ekuhlolisweni okufutshane, uya kubona ukuba onke amabali ahlukaniswe phantsi kwe "Asiya" kunye ne "Afrika," umzekelo, ibhaliwe ngabalobi abakhuluma isiNgesi njengoRudyard Kipling noSir Arthur Conan Doyle , obhala amabali ngala ma zwekazi.
Ngokwahlukileyo, amanye amabali ahlukaniswe phantsi kwe "UFransi" ngaba ngababhali baseFransi; Abanye ngabalobi beNgesi babhala ngeFransi.
Izintlu eziseleyo zibonakala zininzi (iiGhost Stories, ama-Victorian Stories of Successful Marriages, IiNtsholongwane zamaTshaba eMitshatweni engxaki), kodwa akukho mbuzo ukuba bayamnandi ukugqithisa.
Ukongeza kwiiklasi ezimfutshane, iProjén Gutenberg inikeza ukhetho olubanzi lwemilo. Kwinqanaba labantwana, unokufumana iincwadana kunye neenkcukacha zezilwanyana, kunye neencwadi zeefoto.
Xa ucofa kwisihloko esithakazelisayo kwiProjekthi Gutenberg, uya kuba neengxaki ezithile (kuxhomekeke kwinqanaba lakho lokuthuthuzela kunye ne teknoloji) uluhlu lweefayili ozikhethayo.
Ukuba ucofa "Funda le ncwadi ye-intanethi," uya kufumana umbhalo ocacileyo. Le ngxenye ebalulekileyo yenkqubo yeProjekthi Gutenberg ezama ukuyifeza; ezi zibhalo ziya kugcinwa ngekhompyutheni ngaphandle kweengxaki ezifomathiweyo ezifomathiweyo ezingenakuhambelana nezobuchwepheshe.
Nangona, ukwazi ukuba ikusasa lempucuko likhuselekile aliyi kuphucula amava akho okufunda namhlanje iota enye. Iinguqulelo ze-intanethi kwi-intanethi zingabonakali, zingabonakali kumaphepha, kwaye ungafaki nayiphi na imifanekiso.
Incwadi ethi "Imifanekiso Engaphezulu YaseRussia," umzekelo, uquka nje umzekeliso ukuxelela apho unokubona umfanekiso omhle ukuba ufumana kuphela izandla zakho kwincwadi.
Ukulanda ifayile yefayile ecacileyo kunokuba uyifunde kwi-intanethi ibhetele kangcono kuba ungeyipheqa yonke indlela phantsi kwesicatshulwa endaweni yokushaya "iphepha elilandelayo" ngokuphindaphindiweyo. Kodwa kusekuhle kakhulu.
Iindaba ezilungileyo kukuba iProjén Gutenberg ngokwenene ufuna ukuba ukwazi ukufunda nokuzonwabisa ezi zibhalo, ngoko zinika ezinye izinto ezininzi:
HTML. Ngokubanzi, iifayile ze-HTML ziya kunika amava okufunda angcono kwi-intanethi. Jonga kwifayile ye-HTML yeeNgxelo ezininzi zeRussia, kwaye-voilà! - imifanekiso ibonakala.
Iifayile ze-EPUB, kunye okanye ngaphandle kwemifanekiso. Ezi fayile zisebenza kubaninzi be-e-readers, kodwa kungekhona kwi-Kindle.
Yenza iifayile, kunye okanye ngaphandle kwemifanekiso. Qaphela, nangona kunjalo, ukuba iProjekthi Gutenberg iphakamileyo kwiingalo ngenxa yoMlilo oPhezulu, ngokungafani nohlobo lwangaphambili, aluhambelani ngokukodwa neencwadi ze-e-free. Ukufumana iziphakamiso, ungafunda ukuhlaziywa kwe-webmaster yabo yoMlilo oPhezulu.
Iifayile zePacker. Iifowuni zePalmOS kunye nezinye izixhobo eziphathekayo.
Ukufunda izinto zokugcinwa kweengxelo, ngekhompyutha okanye ngenye indlela, kuyahluke kakhulu ukufunda ezinye iincwadi.
Ukungabikho kwemeko kunokuphazamisa. Uyakwazi ukufumana umhla we-copyright, kodwa ngaphandle koko, kunolwazi oluncinane malunga nombhali, umshicileli wenkqutyana yenkqutyana, inkcubeko ngexesha elipapashwe ngalo, okanye ukwamkela kwayo. Kwezinye iimeko, kunokwenzeka ukuba akunakwenzeka ukuba wazi ukuba ngubani oguqulele imisebenzi kwisiNgesi.
Ukuzonwabisa neProjekthi Gutenberg, kufuneka uzimisele ukufunda yedwa. Ukuhamba kwezi ngxelo akufani nokufunda i-bestseller yokuba wonke umntu ufunda, naye. Xa umntu ebudeni be-cocktail ekubuza oko ufundayo, kwaye uphendula, "Ndayigqiba ibali elifutshane le-1884 ngo-F. Anstey ebizwa ngokuba yi-Black Poodle," mhlawumbi uya kuhlanganiselwa ngamehlo angenanto.
Kodwa ngaba uyifunde? Kakade uyenzile, kuba iqala ngalo mgca:
"Ndizibekele umsebenzi wokuthetha kweli phepha, ngaphandle kokunciphisa okanye ukuguqula inkcukacha enye, isiqhelo esibuhlungu kakhulu nesihlazo ebomini bam."
Ngokungafani nemisebenzi emininzi oyifunayo kwii-anthologies, uninzi lwemisebenzi kwilayibrari yeProjekthi ye-Gutenberg ayizange imelane nomzekelo "wokuvavanya kwexesha." Siyazi ukuba umntu kumbali wayecinga ukuba ibali lifanelekile ukupapasha. Kwaye siyazi ukuba ubuncinane omnye umntu - isisebenzi sokuzithandela esivela kwiProjekthi Gutenberg-wacinga ukuba ibali elinikeziweyo lifanelekile ukubeka intanethi ngonaphakade.
Eminye iphezulu kuwe.
Ukuphequlula nge-archive kungakuphakamisa imibuzo malunga nani emhlabeni "ukuvavanywa kwexesha" kuthetha ngokuthe ngqo. Yaye ukuba ucinga ukuba ungathanda inkampani ekufundeni kwakho, unokuhlala ucebisa isahluko se-Gutenberg kwiqela lakho lencwadi.
Nangona kukumangalisayo ukubona igama eliqhelekileyo njengoMarko Twain kwi-archives, inyaniso kukuba "I-Frog Jumping Frog yaseCalaveras County" sele sele i-anthologized wide. Mhlawumbi unayo ikopi kwikhefu yakho okwangoku. Ngoko itekethi yentengo yeGuenberg, nangona ikhulu, ayiyona nto eyona nto ingcono kakhulu kule ndawo.
Iprojekthi yeGuenberg ivelisa umgcini-mkhungululi wezinto zokubhala. Kukho amagugu kuwo onke amaxesha, njengaleli lizwi elimangalisayo elivela kuBill Arp (igama lomnxeba kaCharles Henry Smith, 1826-1903, umbhali waseMelika waseGeorgia), echazwe kwiWit and Humor yaseMelika, ivolumu IX:
"Ndiphantse ndifune ukuba wonke umntu ube ngumnxila oguqulwayo. Akekho umntu ongeli wayeliselayo umfana owaziyo ukuba amanzi amnandi ashushu."
Amanzi ashushu angaba yinto ephathekayo kunxila, kodwa kumntu othanda amabali amfutshane, i-luxury real is a chance to explore a mawaka eetekisi ezicebile-kodwa-ezilibalekile, ukufunda ngamehlo amatsha, ukuze ubone imbali yombhali, kunye nokwenza iingcamango ezingenakucingwa malunga noko ufundayo.
Uhlazo noGonyamelo kuFlannery O'Connor 'Umntu Olungileyo Unzima Ukufumana'
Iinjongo zokuxhatshazwa kuEdgar Allan Poe's 'The Black Cat'
Uhlanga kunye noBuntwali kwiToni Morrison 'Ubumnandi'
Uhlalutyo lwe 'Lottery' nguShirley Jackson
Ukuhlalutya 'iSikole' nguDonald Barthelme
Uhlalutyo 'lweentlanga' nguRaymond Carver
Iingcebiso ezi-4 zokusebenzisa ubungqina beZibhalo
I-8 Best Best Bike Ukuthenga ngo-2018
Nwabele umdlalo weHalloween oPhicilelweyo kwiZiko
Fumana i-Toyota SUVs
Iibonakalo zobuso Ngemihlahlandlela yoMdaniso
Iindawo eziphezulu zokufumana iiNtengiso okanye i-Cheap Comics
I-Chemical Kinetics Inkcazo
UKumkani uEthelbert I waseKenteni
Amadoda aphezulu kwiNgoma Iingoma zama-80s
Umqhubi wokuphelisa kabini usebenza njani?
Impendulo emfutshane Inkcazo
Ngaba Abantu Ngokwenene Bayagcinwa Abaphilayo?
Echo Umbuzo kwiLwimi
I-Whitewater Kayaking River Inkcazelo yesigama
Indlela yokusebenzisa iCompual Term Term 'Sympa'
Ezinye iindlela zokwenza imiyalelo kunye nezicelo